कोलेस्ट्रोल भनेको के हो ? यसलाई कसरी घटाउन सकिन्छ ? TG बढे के गर्ने ? डाक्टरको सुझाव यस्तो छ – Complete Nepali News Portal
प्रल्हाद घिमिरे पोखरा,
एलडीएल कोलेस्ट्रोललाई नराम्रो मानिन्छ भने एचडीएललाई राम्रो मानिन्छ । किनकि रगतमा एलडीएल कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी छ भने छ भने हृदयघात तथा स्ट्रोकको जोखिम बढी हुन्छ । यसै बिच आज हामी समाचारपाटी डटकममा पोखराको सभागृहमा रहेको पोखरा सुपर स्पेसियालिटी हेल्थ क्लिनिकका वरिष्ठ मधुमेय, थाइराइड तथा हर्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर तारा कोइरालासंग कोलेस्ट्रोलको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ ।
हेर्नुहोस यो कुराकानी ।